3 Siyaabood Oo Loogu Adeegsado Sahaminta Daraasad Suuqa Ka Fiican | Martech Zone
Isniin, February 13, 2012 Axad, Oktoobar 4, 2015 Hanna Johnson
Fursaduhu waa haddii aad wax akhrinaysid Martech Zone, waxaad horeyba u ogtahay sida ay muhiimka ugu tahay sameynta cilmi baarista suuqyadu xeelad kasta oo ganacsi. In ka badan halkan SurveyMonkey, Waxaan aaminsanahay in si fiican loo wargeliyo markaad go'aan gareyso waa waxa ugu fiican ee aad u qaban karto meheraddaada (iyo noloshaada shakhsi ahaaneed, sidoo kale!).
Sahaminta khadka tooska ah waa hab fiican oo lagu fuliyo cilmi-baarista suuqa si deg deg ah, fudud, iyo kharash wax ku ool ah. Waa kuwan 3 qaab oo aad ugu hirgelin karto istiraatiijiyaddaada ganacsi maanta:
1. Qeex Suuqaaga
Dood ahaan waxa ugu muhiimsan ee cilmi baarista suuqa ayaa qeexaysa suuqa. Waxaa laga yaabaa inaad taqaanid waxsoosaarkaaga iyo wax soo saarkaaga illaa sayniska, laakiin taasi waxay kuu tahay adiga illaa hadda. Ma caddaan, niman keligood ah oo 30 jir ah ayaa iibsanaya shaamboogaaga, mise gabdhaha qaan-gaarka ah ayaa ah macaamiishaada ugu weyn? Jawaabta su'aashaas waxay saameyn weyn ku yeelan doontaa istaraatiijiyadaada ganacsi, marka waxaad dooneysaa inaad hubiso inaad ku kalsoon tahay.
U dir macaamiil macaamiishaada ah, macaamiishaada, ama taageerayaashaada sahamin dad-fudud ah. Isticmaal sheybaar khabiir ku abuuray, ama abuur mid kuu gaar ah. Weydii waxa ku saabsan da'dooda, jinsigooda, sinjiga, heerka waxbarashadooda, iyo waxa ay xiiseeyaan. Weydii sida ay u isticmaalaan badeecadaada ama adeeggaaga, oo weydii weyddiintooda. Inta badan ee aad ka ogtahay cidda ay yihiin iyo sida ay u isticmaalayaan wax soo saarkaaga, waxaad si fiican u awoodi doontaa inaad wax ka qabato baahidooda oo aad ka ilaaliso inay waxbadan soo laabtaan.
2. Tijaabada fikradda
Dhallin a imtixaanka fikradda si loo qiimeeyo jawaabta macaamilka ee sheyga, sumadda, ama fikradda, ka hor inta aan suuqa loo soo bandhigin. Waxay bixin doontaa hab deg deg ah oo sahlan oo lagu hagaajiyo badeecadaada, lagu ogaado dhibaatooyinka ama cilladaha iman kara, iyo in la hubiyo in sawirkaaga ama astaantaada si sax ah loo bartilmaameedsaday.
U dhig sawir fikradahaaga astaantaada, garaafkaaga, ama xayeysiintaada sahaminta khadka tooska ah oo dhagaystayaashaadu ha doortaan midka ay ugu jecel yihiin. Weydii waxa ku soo kordhay iyaga, waxa sawirku ka dhigay inay ka fikiraan oo ay dareemaan.
Kawaran haddii waxa aad u baahan tahay jawaab celin uusan ahayn sawir ama astaan, laakiin uu yahay fikrad? Qor qoraal kooban oo ku saabsan jawaabeyaashaada si ay u akhriyaan. Ka dib weydii waxa ay xusuusteen, sida ay falcelintoodu ahayd, dhibaatooyinka ay filan karaan. Dad kaladuwan ayaa fikirkaaga ku arki doona caqabado iyo fursado kaladuwan, ra'yigooduna wuxuu noqon doonaa mid qiimo leh markaad hagaajinaysid qorshooyinkaaga.
Ha aqoon sida loo gaaro bartilmaameedkaaga? Waxaan leenahay mid aad lahadli karto…
3. Kasbasho Jawaab celin
Markaad qeexdo dadkaaga suuqa, tijaabiso fikradahaaga, oo aad abuurto wax soo saarkaaga, waxaa jira hal talaabo oo muhiim ah oo ku saabsan geeddi-socodka. Codsi iyo falanqeyn -celin waa muhiim haddii aad rabto inaad sii wado bixinta natiijooyinka wanaagsan. Soo ogow waxaad sifiican u qabatay, arrimaha ay dadku haystaan, iyo jihada ay jeclaan lahaayeen inaad ku dhaqaaqdo mustaqbalka.
Uma baahnid inaad qaadatid dhammaan soo-jeedimaha aad hesho markii aad weydiisaneyso jawaab celin. Laakiin adoo codsanaya oo fiiro gaar ah u leh waxa dadku dhahaan, waxaad si fiican ugu diyaar garoobi doontaa inaad ku guuleysato dadaallada hal abuurka mustaqbalka. Macaamiishaadu way ku qanacsan yihiin inaad weydiisay, wayna jeclaan doonaan hagaajinta aad ka sii badan tahay.
Khasab kuguma aha in lacag lagaa sameeyo si aad ugu dhex gasho cilmi baaris suuq ku ool ah. Kaliya waxaad ubaahantahay inaad ka faa'iideysato aaladaha qiimaha-ku-ool ah ee aad ka heli karto internetka. At SurveyMonkey waxaan had iyo jeer ka shaqeyneynaa inaan horumarino tikniyoolajiyadeena si ay kaaga caawiso inaad sameyso go'aannadaada ugu fiican, ee xog-ogaalka ah. Adiga oo diraya sahan si aad u gaadho suuqaaga bartilmaameedka ah, waxaad hubin kartaa in dadaalkaagu uu yahay sida ugu macquulsan ee suurtogalka ah.
Sahamin-qaadasho farxad leh!
Tags: imtixaanka fikraddademographicscilmi baarissahan onlinejawaab celinta alaabtaSurveyMonkeysahaminta cilmi-baarista suuqa
Farshaxanka Macaamiisha Jacaylka Ku Dhacaya
Feb 13, 2012 markay ahayd 10:53 PM
Waxaan wadnaa sahankeena sanadlaha ah ee ganacsiga bulshada yar yar, anagoo isticmaaleyna sahammo markii ugu horeysay. Runtii aad ayaan ula dhacay sida ugu fudud ee loo dhisay. Laakiin waxa runtii iga dhigay taageere aniga ayaa ah kuwa aruuriya kala duwan. Waxaan jeclahay inaan awoodo inaan arko aaladaha ay wadaan jawaabeyaasha ugu badan.
Waxaan jeclaan lahaa inaan kugu martiqaado inaad nala wadaagto fikradahaaga. Thadda baaritaanka qaado.
Feb 14, 2012 markay ahayd 2:54 PM
Loraine - Waan kugu raacsanahay faallada "fududahay in la dhiso". Markii aan sameyneynay R&D bilowgeygii ugu horreeyay, waxaan ku tiirsaneyn SurveyMonkey ku dhowaad dhammaan xog ururinta. Waxaan dareemayaa in qalabkani yahay mid shuruud looga dhigayo Ganacsatada iyo bilowgaba!
Feb 15, 2012 markay ahayd 2:09 PM
Daraasaduhu weli waa ilo weyn oo laga soo ururiyo macluumaad aad u gaar ah. Way fiicnaan laheyd inaad maqasho fikradahaaga ku saabsan isbeddelka aruurinta jawaab celinta macaamiisha ee ka socota warbaahinta bulshada iyo sida tani u saameyn doonto aagga "soo-jireenka ah" ee baaritaanka websaydhka. Miyaynu ku wajahan nahay meel aanay ku sii jiri doonin?